PressReader - Isolezwe: 2018-04-13 - Intukuthelo ngeqophamlando ngoMadikizela
Intukuthelo ngeqophamlando ngoMadikizela
Isolezwe - 2018-04-13 - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE noMLUNGISI GUMEDE
LISHIYE umphakathi uthukuthele iqophamlando elikhuluma ngesishoshovu esingasekho uNkk Winnie Madikizela-Mandela eliveza olunye uhlangothi obelungaziwa ngaso.
Iqophamlando elenziwa nguPascale Lamche waseFrance owawina izindondo, elithi Winnie litshengiswe yi-eNCA ngoLwesithathu ebusuku.
Liveza lesi sishoshovu sizikhulumela ngezinto eziningi ezenzeka empilweni yaso, ukugqunywa ejele silwa nobandlululo, ukuboshwa kukaMnuz Nelson Mandela, owayengumyeni waso, ukudedelwa kwakhe ejele nezinto ezithinta ukukhokhelwa kwezintatheli okuthiwa zazikhokhelwa ukuze zibhale kabi ngaso.
Kushone elayizolo abantu besakhuluma ngalo abanye bethi beseka uMandela kungafanele ngoba kwakufanele beseke lesi sishoshovu esifihlwa kusasa eFourways Park, eGoli.
Abanye bebegxeka noMbhishobhi Desmond Tutu bethi wayefuna uNkk Madikizela-Mandela axolise ekubeni wayengenzanga lutho abanye begxeka ne-ANC ngokungameseki. Leli qophamlando liveze ukuthi le nhlangano yayalela ukuthi kuphenywe ngokufa kukaStompie Seipei, isishoshovu se-UDF esasina, okwakusolwa ukuthi uNkk Madikizela-Mandela waba nesandla ekutheni anqunywe uqhoqhoqho ngowayengumqeqeshi weMandela Football Club, uJerry Richardson, owagwetshwa udilikajele ngaleli cala wafela ejele.
Abahlaziyi bezepolitiki bathe kufanele umphakathi udinwe ngalokhu okubonile ngoba kuveza okunye ngalesi sishoshovu.
Umhlaziyi, uMnuz Ralph Mathekga, uthe kade azi ukuthi kunetulo ebeliqhutshwa ngabathile kwi-ANC ngenhloso yokunyundela uNkk Madikizela-Mandela.
UMathekga uxwayise ngokuthi kungaba ukungajuli ngengqondo kubantu uma bezonquma ukuthi uMandela noTutu bangabadayisi.
“Awukho umzabalazo oqhutshwayo ngaphandle kokungcoliswa kwamagama abanye abantu ababonakala beyingozi endleleni yabathile. Kuwumkhuba okhona ukuthi uma kushone umuntu bese kukhulunywa kahle ngaye ekubeni bekuthule esaphila,” kusho uMathekga.
UMnuz Xolani Dube umhlaziyi, uthe i-ANC ibiyisitha sikaNkk Madikizela-Mandela ngenxa yemibango yangaphakathi embuthweni.
“Yize uNkk Madikizela-Mandela kade enyundelwa kwi-ANC kodwa umphakathi ubumthanda,” kusho uDube.
Uthe i-ANC iyona kanye emcekele phansi uMama uWinnie.
Uncome abadidiyeli beqophamlando wathi bakhombise ukuwuhlonipha umsebenzi wabo ngokungalikhiphi uNkk MadikizelaMandela esaphila.
UNobhala jikelele we-ANC, uMnuz Ace Magashule, uthe inhlangano yenza elikhulu iphutha ngokungahloniphi uNkk MadikizelaMandela.
“Bekumele ahlonishwe esaphila. Akekho esingamgxeka ngaphandle kwe-ANC. Asizange sibenze ubulungiswa kuNkk MadikizelaMandela. Kukhona abantu ababengekho emzabalazweni bagxeka abazabalaza,” kusho uMagashule ekhuluma enkonzweni yokuhlonipha lesi sishoshovu esontweni iRegina Mundi eSoweto izolo.
Uthe amaqabane awavikelani okunalokho adicilelana phansi. Uqhube wathi kwakumele uNkk Madikizela-Mandela ahlonishwe ngeqhaza lakhe emzabalazweni.
UDkt Nkosazana Dlamini Zuma, ilungu lesigungu esiphezulu se-ANC, uthe uyavumelana nokushiwo nguMagashule wathi yisikhathi sokwakha inhlangano kukhankaselwe ukhetho ukuze idle umhlanganiso.
Nakhu okunye okucashunwe ezinkundleni zokuxhumana ngaleli qophamlando:
ULucky ucashunwe kuTwitter ethi sengathi besichoma uphaphe lwegwalagwala okungesiye uma sihlonipha uTata esikhundleni sikamama.
Iqophamlando lizophinde likhonjiswe namuhla ngo-9 ebusuku ku-eNCA, kusasa ngo-4 ntambama nangeSonto ngo-8 ebusuku.
Khonamanjalo kulindeleke nomengameli bamanye amazwe emngcwabeni walesi sishoshovu ozobe ukusasa e-Orlando Stadium, eSoweto.
Omengameli asebeqinisekisile ukuthi bazoba khona ngowaseCongo, uDenis Sassou Nguesso nowaseNamibia, uHage Geingob. Umholi we-UDM uGeneral Bantu Holomisa noMnuz Mmusi Maimane weDA bazofika namathimba abo.
UNKK Winnie Madikizela-Mandela